Ahoana no ahafahantsika manakana ny fizotry ny faminaniana amin'ny andro farany? : Martin Vrijland
Ny fanontaniana avy amin'ny lohateny dia ho mahagaga ho an'ny olona maro ihany. Mety ho mampalahelo ianao ka hahita ny fe-potoana farany amin'ny famaritana ny teny tsy misy dikany. Tsy hitanao ve hoe firy ny olona marary saina mbola manana rafi-pinoana ihany? Ny finoana ny evolisiona, ohatra. Eny, izany dia rafitra fandaminana, satria na dia manandrana manaporofo izany teoria aza ny siansa dia mbola tsy misy vatosoa mafy ary misy ny banga eo amin'ny fisainana. Ny finoana ny horoscopes na ny psychic dia ohatra tsotra kokoa amin'ny rafi-pinoana iray. Ny olona milaza ho tsy mino an'Andriamanitra dia mino fa ny kintana dia voafetra ny hoavin'izy ireo. Raha mpanao materialist ianao, tsy mino ve ianao fa misy zavatra mahakasika ny fizotry ny fiainana? Vao haingana aho no niresaka tamin'ny tsy mino an'Andriamanitra tsy mino an'Andriamanitra izay mino ny faha-5 taonany vaovao. "Ny tena zava-marina dia avy eo", nanontaniako izy, noho izany tsy maintsy nankatoaviny ny valiny ary nisy zavatra nimonomonona tamin'ny endriny. Olona an'arivony tapitrisa kosa no manaraka ny fivavahana ary mino ny fisian'ny rivotra na fanahy. Ireo olona ireo dia amin'ny ankapobeny koa dia mino ny faminaniana amin'ny fotoana farany. Ampifandraisina amin'izany ny finoana ny fahatongavan'ny Mesia manokana. Ireo olona ireo dia tsy miandrandra hatramin'ny farany amin'ny fomba iray satria mino izy ireo fa amin'ny farany dia havotana sy hiaina mandrakizay izy ireo.
Io dia fintina fohy ary misy hevitra maromaro misy ifandraisany amin'ireo fomba fijery ara-pinoana ireo, saingy ny zava-drehetra dia mazava fa misy karazana ady amin'ny fotoana farany tsy maintsy ho avy: ady toy izany. Ny toerako dia ny fifanoheran-kevitra eo amin'ireo fivavahana dia ny hery mitarika an'io ady io. Ireo fomba fijery mifanohitra ireo dia miantoka fa ny foko manontolo dia te-hanatratra ny vokatry ny fivavahany. Izany dia miantoka fa olona an-tapitrisany no manao ny asan'ny tafika ary manome azy ireo ho an'ny ady lehibe iraisam-pirenena manaraka. Io ady farany io dia tsy maintsy mibaribary amin'ny fihodinana an'i Jerosalema ary ho ady eo amin'ny Islam sy Zionisma (na ny Andrefana kristianina miaraka amin'i Israely). Ny ankamaroan'ny mpamaky ara-pivavahana dia mamela ny soron'izy ireo amin'ny famakiana izany. Mihevitra izy ireo fa ny zavatra tena mahazatra indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny fahatongavan'ity farany amin'ny ady ity ary matoky tanteraka fa handresy izy ireo. Izany dia ao amin'ny faminanian'ny finoany ary mino izany izy ireo. Ankoatr'izany, famonoana olona maro no mipoitra miaraka amin'ny fahantrana lehibe indrindra ho zavatra izay tena ilaina ny ratsy. Ireo mpitarika sy mpitondra fivavahana maneran-tany dia mampiasa ireo foto-pinoana ireo mba hananganana ny miaramilany amin'ny tanjona voafaritra. Tsia, tsy miankina amin'ny finoana silamo izany; izay mihatra koa (ary indrindra indrindra) amin'ny Kristianisma sy ny Jodaisma, izay misy ny roa farany, eo amin'ny kibo ny tanana roa.
Ny hany fomba hisakanana ny tondrozotra mankany amin'ny ady maoderina farany dia ny olona an'arivony dia lasa takatr'izy ireo fa tsy tokony hamela fanabeazana ny zanany. Na dia mihozongozona hatrany amin'ny fandrobana ady aza isika dia mbola manan-danja hatrany ny fanenjehana ny hena sy ny ra. Na izany aza, ny vintana izay handao ny olona rehetra an'arivony tapitrisa ireo dia tsy dia kely loatra, satria lasana amin'ny taranaka amin'ny taranaka izy ireo ary noho izany dia matanjaka ny fatokisana. Ny fanontaniana mikasika ny fomba ahafahan'ny Andriamanitra fitiavana, ny ady ary ny herisetra dia mamela na manaporofo izany aza, tsy tokony hangatahana. Zava-nisongadina ihany koa fa ny olona manana finoana matoky dia mamela faminaniana mifanaraka amin'ny faharesen'izy ireo. Ny 'faran' ny tsara 'dia ilay valisoa avy amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy, amin'ny farany dia mitodika manodidina ny fiarovana ny fanahy sy ny fiainana mandrakizay ao amin'izany fanahy izany.
Ny hevitra momba ny fanahy àry dia manan-danja lehibe. Raha tsy misy ny fanahy ary ny fiainana dia zavatra ara-nofo fotsiny, dia tsy hamela ny tenantsika hanolo-tena amin'ny ady isika, avy amin'ny hevitra hoe ny fanahintsika dia afaka mankany amin'ny lanitra na hiaina mandrakizay (misaotra an'Andriamanitra noho ny safidy). Na izany aza, ho an'ireo izay nampianatra fisehoan-javatra ara-pananahana na foto-pinoana ara-pinoana, dia tsy maintsy mazava tsara fa tsy maintsy misy zavatra mifanentana amin'ny famaritana ny teny hoe 'fanahy' na ny fofon'aina.
Raha vao hitantsika fa ireo faminaniana rehetra ireo sy ny fifehezana rehetra mitranga dia manome porofo fanampiny ho an'ny hevitra hoe miaina ao anatina simulation mialoha ny famolavolana maromaro isika, moa ve isika afaka manapa-kevitra ny hampiato ny vokatra amin'ny fomba fivavahana fandaharana mba hamaritana, fa amin'ny alàlan'ny filalaovana lalao dia tsy mifanaraka amin'ny fitsipika intsony. Raha hitanao fa mihalalina ny faminaniana ara-pinoana, dia ho hitanao fa marina ny fivavahanao, na azonao atao ny manomboka mahita fa porofo izany fa misy ny script.
Vakio kely kely ny lahatsoratra teo aloha ary jereo koa ireo lahatsoratra voatanisa momba ny simulation. Ampitahao amin'ny lalao an-tserasera izay ahitana mpilalao an'arivony tapitrisa miaraka amin'ny mpanatontosa eo an-tanany mipetraka mitsidika ny efijery ary miezaka ny handresy ny lalao, halaim-pirahalahiana, ary handresy. Ny tanjona dia ny hahitantsika hoe iza no mifehy ny mpanara-maso. Momba ny fahitana fa isika dia miara-mahita (miara-miasa) fanahy izay mahita tontolo matotra, izay ahitana ny trangam-panodinana trangam-panodikana izay miantoka fa ny mpilalao rehetra dia manao toy izany ihany koa.
Ny fanandramana siantifika matetika (izay tsy niraharaha ny teoria nataon'i Albert Einstein), ny 'dingana roa fanandramana'(fanandramana indroa), dia mampiseho fa ny zava-dehibe dia mitaky mpandinika mba hivoaka avy amin'ny' superposition '. Azonao atao ny mampitaha izany amin'ny fijerena eo amin'ny efijery raha toa ianao ka milalao lalao playstation. Rehefa mifindrafindra ny controller ianao, dia ny sary eo amin'ny screen ou dia avy amin'ny loharanom-baova (ny lahatsoratra dia avy amin'ny 'superposition', ny toerana izay mbola misy foana ny fahafahana rehetra). Amin'ny lalao marobe, dia mpandinika voalohany izay mamaritra ny zavatra hitan'ny mpilalao hafa. Raha hitan'ny mpilalao voalohany amin'ny toerana iray ny mpilalao voalohany, dia tsy maintsy mijanona ho toerana iray ho an'ireo mpilalao hafa foana izy io. Ao amin'ny andian-dahatsariko momba ny simulation (jereo ny 'thinkers', 'simulation' ny menus) dia afaka mamaky fanazavana amin'ny antsipiriany ianao ary hahita lahatsoratra izay mampiseho fa ny takelaka Cloud Google ho an'ny lalao augmented Reality mampihatra fomba iray Izany dia mitovy tanteraka amin'ny fitsipiky ny fifangaroana tranga. Raha ny marina, ny famantarana rehetra dia manondro ny hevitra hoe miaina anaty zava-misy marina isika.
Izany zava-misy izany dia toa (toy ny playstation game) mba ho alamina araka ny fitsipiky ny mpanorina. Na izany aza, manana safidy malalaka ireo mpilalao. Izany dia fepetra, satria tsy misy fahalalahana ny safidy dia ny famaritana marimaritra (efa voafaritra mialoha) ary midika izany fa tsy ho afaka ny fanahy ary noho izany dia tsy ampiasaina ny simulation, satria ny vokatr'izany dia efa voafetra. Na dia izany aza, satria ny mpanamboatra ny lalao dia te hamadika ny vokany amin'ny sitrapony (jereo ny faminaniana ara-pinoana), dia nametraka ny mpilalao azy manokana izy tao anatin'ilay lalao fa ireo mpilalao hafa ao amin'ny lalao marobe (ny fanahin'ny safidy malalaka) mba hamitahana ny vokatra tadiavina. Ireo avatars ao amin'ny lalao izay eo ambany fanaraha-mason'ny mpanamboatra ny lalao, andramo ny mandefa ny mpilalao hafa amin'ny lalao. Izany dia manaja hatrany ny safidy malalaka avy amin'ireo fanahy izay nanomboka nilalao ilay lalao, saingy misy fiantraikany lehibe izany, satria miorina ny lalao ka saika tsy ho tafavoaka velona raha tsy mandray anjara amin'ny fitsipika napetraka avy etsy ambony ( amin'ny alalan'ireo avara-masihin'ny mpanorina). Ireo avatara notarihan'ny mpanamboatra ny lalao dia any amin'ireo faritra avo indrindra amin'ny lalao. Izy ireo no mamorona ny vondrona elitista, toy ny; Indraindray dia antsoina hoe bloodlines pharaoh. Izy ireo dia eo amin'ny toeran'ny governemanta, banky, rafitra ara-pivavahana ary ny rafitra piramida iray manontolo izay ny ankamaroan'ny mpamaky no mahafantatra bebe kokoa na kely kokoa.
Rehefa tsapantsika fa ny mpandinika antsika fotsiny dia ao amin'ny kilalaon-tsarimihetsika iray izay ny mpanorina dia miezaka mifehy ny vokatra amin'ny alalan'ny fiantraikany amin'ny paikady voafehy, afaka manatsoaka hevitra roa isika. Ny voalohany dia ny maha-olom-pirenena antsika ary ny fisiantsika dia ivelan'ny 'efijery'. Ny fehin-kevitra faharoa dia rehefa manakana ny lalao araka ny fitsipika napetraky ny paosin'ny mpanorina isika dia afaka manova ny vokatra. Ny mety fahatelo mety dia mety haka ny simulation avy any ivelany ary hanitsy ny fango loharano. Ny fanontaniana lehibe indrindra anefa dia ny hoe mety ho voafandrika ao anatin'ity simulation ity ny fanahintsika ary mieritreritra izany fotsiny isika izao no izy ary izany angamba no lesona lehibe indrindra: Aza adino miaraka amin'ny saribakoly ao amin'ny lalao. Mandritra izany, aza avela halaim-panahy ho fanamiana, fitaovam-piadiana sy tolona ianao. Atsaharo ny milalao ny lalao arakaraka ireo fitsipika napetraka etsy ambony ary esory ny fifehezanao ny finoanao.
Ity ambany ity ny ohatra iray amin'ny fahitana ara-pinoana ny tolona farany.
Vakio ny rehetra momba ny 'fanandramana roa misedra' sy ny fomba iainantsika amin'ny simulation: fidirana mivantana
Tags: avo roa heny, fotoana farany, andrana, Featured, physique quantum, faminaniana, fivavahana, ara-pivavahana, simulation, slits, superposition
Vital Info nanoratra hoe:
5 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 14
Heveriko fa ny hatsaran-toetra no hanafaka antsika amin'ny matrix.
Ny herim-panahy dia herim-po, fandeferana, fangorahana, fahamarinan-toetra, famelan-keloka, fankasitrahana. Raha ampy ny olona mampihatra ireo hatsaran-toetra ireo, dia misy programa vaovao noforonina ao anatin'ny eritreritra manerantany, ka manapaka ny fizarana taloha sy ny fitondrana tolona.
Misara-kevitra ny fizarana. Toa izany no fandaharana fototra izay efa niasantsika nandritra ny fotoana ela. Ity dia tokony hacked ary overskrited amin'ny programa tsara kokoa. Izany no hitako.
Marina ve izany? Heveriko izany. Tsy fantatro ny fomba ahafahanao miala amin'ny ady.
5 Janoary 2019 ao amin'ny 17: 42
Mila mifandray amin'ny matroka izay iainantsika ankehitriny isika. Tsy azo atao ny mivoaka sy tsy mandray anjara. Raha tsy tianareo ny hahatanterahan'ireo faminaniana dia tsy maintsy manana mpamily vaovao izahay. Azo atao amin'ny alalan'ny fanovana ataon'ny fitondrana izany tsy azo atao amin'ny alàlan'ny fifidianana. Efa voafaritra ny valiny. Tsy misy fanoherana politika any Holandy. Ny fanovàna ny rejisitra dia azo atao, ohatra, aseho isan'andro (fifandraisana) ary / na samy milaza ny marary sy / na manatanteraka ny asany tsikelikely, sns. Eritrereto izany. Ny zavatra lazain-dry zareo dia tsy misy afa-tsy ny fahafahako ary tsy miantso olona hanao izany aho, tsotra fotsiny ny fanatanjahantena. Ny tsirairay dia manana ny andraikiny manokana eo ambanin'ny lalàna. Tsy maintsy manana demokrasia tena marina ihany koa isika amin'ny farany raha ny fikasana dia hisy ny repoblika. Tsy misy olona tokony hahazo asa sy / na fiantraikany amin'ny lova. Tokony hanana fahafahana ho tonga filoham-pirenen'i Holandy ny tsirairay. Ny andraikitry ny mpiasam-panjakana dia tsy maintsy fehezin'ny fe-potoam-pitsarana tsy misy fepetra koa, mba hahafahan'ny rehetra manatanteraka izany. Ny fahaiza-manaon'ny fifaninanana dia ny sangan'asam-pifidianana fa tsy ny antony politika.
Raha manao izany izy ireo dia tokony ho voatery hizara ny toerana rehetra misy azy eo amin'ny fiarahamonina na hizara mitovy ny fahefana hizarana amin'ny olona tsy mpikambana ao amin'ny Club. Ny fifidianana dia tokony ho tena miafina ary ny olom-pirenena rehetra dia afaka manamarina ny vokatra sns etc.
5 Janoary 2019 ao amin'ny 21: 19
Manaiky tanteraka an'i Martin Ireo no fanontaniana nangatahako fony aho ankizy ary tsy nahazo valiny mahafa-po.
Tsy hiady ho an'ny tafika mihitsy ireo zanako sy ny tenako. Tsy mankalaza ny tra-boina rehetra isan-taona ihany koa isika. Voavono ireo olona ireo noho ny famelany hilaza fa Eoropeana mahaleotena izay manova an'i Eoropa taona vitsy taty aoriana.
Eto isika dia tonga amin'ny lazaina hoe mpitarika voafidy izay ny anarantsika dia mamaritra ny atao hoe politika. Hatramin'ny fahazatoantsika dia mianatra mila mpitarika isika, saingy ny past dia nanaporofo fa io dia io ary mitoetra ho lalao miaraka amin'ireo mpitarika avy any ivelany.
Mpitarika tena izy dia mpanompo!
Raha toa ka milalao ny orinasa ianao dia afaka mifidy eo amin'ny tontolo milamina sy tontolo iray miaraka amin'ny zombies sy ny toy izany. Heveriko fa mihatra amintsika ihany koa izy io, ankehitriny isika dia milalao ny baolina zonbi ary sarotra ny mahita ny sehatra lehibe. Ireo mpamonjy an'ity tontolon'ny ziobe ity dia maniry ny hino fa ity tontolo duelista ity dia ho lasa am-pilaminana, saingy tsy mino an'izany aho. Heveriko fa tsy maintsy maty ianao alohan'ny ahafahanao miverina any amin'ny sakafo maina. Noforonina toy izany isika mba hatahotra ny fahafatesana. Ankoatra izay, raha maty noho ny herisetra isika, dia mety hanova ny safidy ratsy indray ao amin'ny sehatra lehibe.
Ity no fanontaniana sarotra amiko: Inona no toetry ny fanahintsika / fanahy aorian'ny fahafatesana. Moa ve tena fanahy mahaleotena tokoa isika sa mbola misy fiantraikany amin'ny safidintsika ao amin'ny loha-hevitra?
Matoky aho fa mahazo fahalalana be dia be izahay androany fa sarotra kokoa ny mitarika antsika.
Izany dia mety hianjera amin'ny zava-misy fa noho io lalao io dia mamela ny toetrantsika tena tsy mahafinaritra eto isika.
Amin'ny fijerena izany, dia havoaka tsy ho ela isika ary tsy ho afaka hiverina.
Fantatray avy eo fa ny fandriampahalemana milamina dia mitoetra ho tony satria madio ny feon'ny fieritreretantsika. Ny haavon-tsambo dia ho avo loatra ka tsy ho tafiditra ao ny fahita matetika!
6 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 44
Any no handondonana ny varavarana.
6 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 46
oops, diso. Nihevitra aho fa "teo am-baravarana i Jesosy" tsara tarehy kokoa.
6 Janoary 2019 ao amin'ny 12: 21
Ny fampielezan-kevitry ny avana dia manomboka amin'ny finoana ny Tompo!
(Misavorovoro i Losifera)
7 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 10
Ary ahoana no ahafahantsika mampiely ny fampielezan-kevitra Na dia lehibe kokoa aza, amin'ny iray ihany
Mangataha antoko politika mpanao politika (mpilalao) (amin'ny vidiny) mazava tsara
manohitra ny avana, satria mbola misy fiangonana iray hafa indray
Fihetsiketsehana hanangona ny saina amin'ny fotoam-pivavahana.
Ary mbola! Ny olona dia hilaza hoe, oh ry jar, tsy tokony hanao izany mafy ianao, pfff ilay milaza fa tokony hijery manodidina azy ireo kokoa, avy eo dia mijery fotsiny alohan'ny tsunami amin'ny tandindona ny avana dia nampiharina an-keriny,
Ankehitriny, na dia ao amin'ny trano fiangonana aza, pff
6 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 48
Saingy misy zavatra.
6 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 41
« Hanomboka! Faly sy mahasalama 2019 ho an'ny mpamaky rehetra!
Ny Kim Dotcom 'famoahana ny fanjakana lalina', 'The Dark Overlord' ary fanoherana bebe kokoa »
Total visits: 12.331.201